Samsung Keyboard 3.3.43.14 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.3.43.14 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
Application မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း Samsung Keyboard
Samsung Keyboard ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အမျိုးမျိုးသော input ကိုနည်းလမ်းများနှင့်အဆင်ပြေ features တွေပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့ပိုပြီးအဆင်ပြေစာရိုက်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။
- Samsung က Keyboard ကို 80 ကျော်ဘာသာစကားများထောက်ခံပါတယ်။
- ခန့်မှန်းစာသားကို: သင်ရိုက်ထည့်ဘယ်လိုလာမည်နှင့်သင်ရိုက်ထည့်အဖြစ်စကားလုံးများနှင့်စာပိုဒ်တိုများအကြံပြုသည်။ အဆိုပါထောက်ခံချက်အင်္ဂါရပ်ကို Samsung Keyboard ကိုတစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူများအတွက်တို့ကိုစုဝေးစေ၏ဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီးပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။
- အော်တိုစာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးမှု: စာလုံးပေါင်းမှားယွင်းမှုရှာပြီးမှန်ကန်သောအခြားနည်းလမ်းအကြံပြုထားသည်။
- စာသားအတိုကောက်များ: မကြာခဏအသုံးပြုသောစကားများနှင့်စာပိုဒ်တိုများများအတွက် shortcuts တွေကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့။ သင်ကထောက်ခံချက်င်းဒိုးကနေ shortcuts တွေကိုနှိပ်ပြီး 'စာသားကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်အလွယ်တကူ input ကိုကစာသားနိုင်ပါတယ်။
- input ကိုဘာသာစကားများသို့ပြောင်းပါ: သင်ဘယ်ဖက်သို့မဟုတ်ညာဖက်ဖို့ spacebar ပွတ်ဆွဲခြင်းအားဖြင့် input ကိုဘာသာစကားပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောလိပ်စာ, အီးမေးလ်, နှင့်ရှာဖွေရေးအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသော input ကိုပြတင်းပေါက်များအတွက် optimized သော့ပေးပါသည်။
- ကသင့်ရဲ့စာလုံးပေါင်းမှားယွင်းမှုပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် Samsung က Keyboard ကို, သငျသညျအများအားဖြင့်ရိုက်ထည့်ပုံကိုလေ့လာဆန်းစစ်။
- Clipboard: သင်သည် clipboard ထံသိမ်းဆည်းစာသားကိုသို့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေကို select, သူတို့ paste နိုင်ပါတယ်။
- Keyboard ကိုပွတ်ဆွဲထိန်းချုပ်မှု: သင် input ကိုကစာသားဒါမှမဟုတ်ကီးဘုတ် screen ပေါ်မှာအမူအရာဖျော်ဖြေခြင်းအားဖြင့် cursor ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
- Voice ကို input ကိုနှင့်လက်ရေးအသိအမှတ်ပြုမှုရရှိနိုင်ပါသည်။
- Split ကိုကီးဘုတ်, Floating ကီးဘုတ်, အများနှင့်တစ်ဦးလက် input ကိုကီးဘုတ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
• Keyboard ကိုမိမိစိတ်ကြိုက် setting များကို
- ထို Option ကိုများနှင့်သင်္ကေတစာရင်းနှင့်သင်တို့အဘို့တစ်ဖြတ်လမ်း assign ချင်သောကို select လုပ်ပါဦးတည်းဖွင့်လှစ်ဖို့ကို Long-စာနယ်ဇင်းစိတ်ကြိုက် key ကို။ (ဥပမာ,, Voice input, လက်ရေးအသိအမှတ်ပြုမှု, Clipboard, အီမိုဂျီ, တစျခုမှလက် input ကို mode ကို, Keyboard ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ, သို့မဟုတ်သင်္ကေတ)
- စိတ်တိုင်းကျသင်္ကေတ: သင်၏မကြာခဏအသုံးပြုသောသင်္ကေတများနှင့်အကြိုက်ဆုံးသင်္ကေတများ Save နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်သူတို့ကိုအသုံးပြုပါ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာနှိပ်ကာလအားဖြင့်သင်္ကေတစာရင်းဖွင့်ပါ (။ ) ကိုအလွယ်တကူ input ကိုသင်္ကေတဖြစ်သည်။
- Keyboard ကိုအရွယ်အစား, အရေအတွက် keys နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဇာတ်ကောင်: သင်အားလုံးလေးယောက်လမ်းညွန်ထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကီးဘုတ်ရဲ့အရွယ်အစားကိုထိန်းညှိများနှင့်လည်းနံပါတ်သော့နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဇာတ်ကောင်ကီးဘုတ်ပေါ်မှာထည့်သွင်းထားရမည်ဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။
- အမြင့်ဆနျ့ကငျြဘကီးဘုတ်: Samsung က Keyboard ကိုအနိမ့်ရူပါရုံကိုသို့မဟုတ်အရောင်ရူပါရုံကိုချို့ယွင်းနှင့်အတူအကောင့်အသုံးပြုသူများသည်သို့ယူ high-ဆနျ့ကငျြဘကီးဘုတ်ပေးပါသည်။
•အခြား features တွေ
- အီမိုဂျီ: 3000 ကျော်ရုပ်ပြောင်ကိုသုံးပြီးပျော်စရာလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပွောပွပါ။
- ဘာသာစကားကို update ကို: ဒါဟာပုံမှန်စကားလုံးအသစ်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သိလာကြတယ်။ သင်က Keyboard ကို setting များကိုမှတဆင့်ဘာသာစကားများကို update နိုင်ပါတယ်။
- Backup ကိုနှင့်ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်: သင်ကို back up နှင့် Samsung တိမ်တိုက်သုံးပြီး Keyboard ကိုဆက်တင်နှင့်ဒေတာ restore လုပ်လို့ရပါတယ်။
- သင်ကား mode ကို Samsung က DeX, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး Keyboard ကိုအဖုံးကို အသုံးပြု. လည်းတစ်ဦးဟာ့ဒ်ဝဲကီးဘုတ်မှတဆင့်စာသားကို input ကိုထောက်ခံပါတယ်အခါဒါဟာ optimized ကီးဘုတ်လက်ကွက်များပေးပါသည်။
အဆိုပါရရှိနိုင် features တွေ※တိုင်းပြည်သို့မဟုတ်ကိရိယာပေါ် မူတည်. ကွဲပြားနိုင်သည်။
အင်္ဂလိပ်စကား (အမေရိကန်, ဗြိတိန်, AU), အီတလီ, စပိန် (အမေရိကန်, ES), အဘိဓါန် Galician-, ကာတာလ, အဘိဓါန် Basque-, ဒတျချြ, ပိုလနျ, ပျေါတူဂီ, ဘှ, ဒိန်းမတ်, ဆွီဒင်, ဖင်လန်, လန်, Estonian အဘိဓါန်, ရိုမေးနီးယား, ဘော့စျနီးယား, လက်ဘီအံ, အာနီယံ, စလိုဗကျ, တူရကီ, Azerbaijani-, Albanian အဘိဓါန်, ဗီယက်နမ်, Tagalog-, အဘိဓါန် Uzbek-, အာဖရိက, ဂျာဗား, ဆူဒနျ, ဂျာမန်တခ်မ, ဆွာဟီလီ, ရိုရု, အစ်ဂဘို, ဥစာ, Twi အဘိဓါန်, ဇူလူ, ဆက်ဆိုသို, ဇိုစာ, အိုငျးရ, Silesian-, အငျဒိုနီးရှား, မလေး, ခကျြ, -Croatian, စလိုဗေးနီး, ဟနျဂရေီ, ဆားဗီး, ပြင်သစ် (FR,, CA), ဂက်စီ, ရုရှ, ဘူဂေးရီးယားယူကရိနျး, Kazakh-, စီဒိုနီယံ, လီး, ခရူဂ, Tajik-, ဘီလာရုစ်, အာရဗီ, ဖာစီ, ဒူ, ဟိန္ဒူ, တမီး, ကန်နာဒါ, ဂူဂြာရ, ဂု , မလေးရာလ, ဘင်္ဂါလီ, ဘင်ျဂါလီ, ပနျခြာပီ, ဆငျဟာလ, နီပါလီ, မာရသီ, အိုရီရာ (Odia), Maithili, ဂရိ, ဟီဘရူး, ဂျြောဂြီယနျ, အဘိဓါန် Armenian-, ကိုးရီးယား, မျက်မှောက်ရေးရာနှင့်တရုတ် | ပြည်မ, ရိုးရာတရုတ် | ဟောင်ကောင်, ရိုးရာတရုတ် | TW, ဂျပန်, ထိုင်း, လာအို, ခမာ, မြန်မာ, တိဘကျ။
Samsung Keyboard အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Samsung Keyboard အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Samsung Keyboard အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Samsung Keyboard အား အခ်က္ျပပါ
superuser4k စတိုး 45.78k 26.46M
Samsung Keyboard ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Samsung Keyboard အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.3.43.14
Release date: 2019-06-17 19:08:09
Samsung Keyboard APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ